Imikhiqizo Emisha Iyeza
Muva nje inkampani yethu itshale imali engu-USD500,000 emnyangweni we-R & D ngemikhiqizo yethu emisha: ipompo lamanzi emincane ngomshini wokubulala amagciwane, ipompo yokupompa umshini wokuphefumula wezokwelapha, ipompo yokuhambisa amanzi esishisayo engenamanzi, ipayipi elincane lamanzi othomathikhi lamanzi, pum ...
Uma kuqhathaniswa nendawo yemvelo, ukuminyana kwezinhlanzi ezise-aquarium kukhulu impela, kanti nenhlanzeko yezinhlanzi nezinsalela zokudla ziningi. Lezi zihlephula futhi zikhiphe i-ammonia, eyingozi ikakhulukazi ezinhlanzini. Uma kukhiqizwa imfucuza eminingi, kukhiqizwa i-ammonia eningi, futhi ...
Ngokuya ngezimo zokusebenza, i-cooler yomoya ingahlukaniswa ngomthethonqubo wezandla kanye nomthethonqubo ozenzakalelayo. 1) Imodi yokulungisa imanuwali ukulungisa amapharamitha wokusebenza we-fan noma i-shutter ngokusebenza ngesandla, njengokuvula nokuvala ifeni noma ukushintsha i-fan blade angle, i-spe ...
Umkhuba Wokukhula Kwe-Aquarium Water Pump Kanye ne-Solar Water Pump
Ngokuqondene nenkampani YUANHUA, umnyango wethu we-R & D uhlala uthuthukisa imikhiqizo emisha, ehlangabezana nemfuneko yamakhasimende ahlukene ezimakethe zasekhaya nakwamanye amazwe. Kusimangaze ukuthi, Ethintwe yigciwane lomqhele elisha, imboni yomthombo wobuciko be-aquarium kanye nesidingo semakethe yelanga siqinile kulo nyaka, futhi ...